သူဟာဒလန်တစ်ယောက်လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပေးဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုလာတဲ့ မြင့်မြတ် - Myanmar Thadin
သူဟာဒလန်တစ်ယောက်လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပေးဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုလာတဲ့ မြင့်မြတ်
April 19, 2021 by Myanmar Thadin
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောမြင့်မြတ်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်အောင်သဘာဝကျကျသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပါစပ်ဖျားမှာ မြင့်မြတ်ဆိုပြီး အခုချိန်ထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပီပြင်ပိုင်နိုင်လွန်းတဲ့ မြင့်မြတ်က ဇာတ်ကားတစ်ကားချင်းစီတိုင်းကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သောမိန်းမများကားမှာ စတင်ပြီး ဂျင်းကောင်ဆိုပြီး နာမည်တွင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစပိုင်းမှာတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူတွေကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မြင့်မြတ်ကလည်းပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ကိုမယုံကြည်ကြတော့ပဲ ဒလန်လို့ထင်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အခုလိုပဲရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
မြင့်မြတ်က”တစ်နိုင်ငံလုံးအရေးအခင်းဖြစ်နေချိန် ပြည်သူအားလုံးဖိအားပေါင်းများစွာအောက်မှာ မြေစာပင်ဖြစ်နေကြတာပါ…. ကျွန်တော်လည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ “မြေစာပင်” တစ်ပင်ပါပဲ… ကျွန်တော် လုံးဝ လုံးဝ “ဒလန်” မဟုတ်ပါဘူး…ယုံကြည်ပေးပါ 🙏🙏🙏” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ပရိတ်သတ်ကို ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရရှိပါတယ်နော်…။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ….ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မင္းသားေခ်ာျမင့္ျမတ္ဟာဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို ပီျပင္ပိုင္နိုင္ေအာင္သဘာဝက်က်သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ ပါစပ္ဖ်ားမွာ ျမင့္ျမတ္ဆိုၿပီး အခုခ်ိန္ထိရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
သ႐ုုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာပီျပင္ပိုင္နိုင္လြန္းတဲ့ ျမင့္ျမတ္က ဇာတ္ကားတစ္ကားခ်င္းစီတိုင္းကိုလည္း ပရိတ္သတ္ေတြရဲ့ ရင္ထဲထိေရာက္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့အတြက္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ခ်စ္ေသာမိန္းမမ်ားကားမွာ စတင္ၿပီး ဂ်င္းေကာင္ဆိုၿပီး နာမည္တြင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္…။
လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစပိုင္းမွာေတာ့ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက အြန္လိုင္းအသုံးျပဳသူေတြၾကားေရပန္းစားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကက်င္းပတဲ့ သၾကၤန္ပြဲေတာ္မွာ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအထဲမွာ ျမင့္ျမတ္ကလည္းပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြက စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ကိုမယုံၾကည္ၾကေတာ့ပဲ ဒလန္လို႔ထင္ေနၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကို အခုလိုပဲရွင္းျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္.။
ျမင့္ျမတ္က”တစ္နိုင္ငံလုံးအေရးအခင္းျဖစ္ေနခ်ိန္ ျပည္သူအားလုံးဖိအားေပါင္းမ်ားစြာေအာက္မွာ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနၾကတာပါ…. ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္ပါ “ေျမစာပင္” တစ္ပင္ပါပဲ… ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝ လုံးဝ “ဒလန္” မဟုတ္ပါဘူး…ယုံၾကည္ေပးပါ 🙏🙏🙏” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေနတစ္ဆင့္ ပရိတ္သတ္ကို ရွင္းျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရရွိပါတယ္ေနာ္…။
Categories ဆယ်လီ သတင်း Post navigation
စံပယ်ပင်များ ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်စေမယ့် နည်းလမ်း
မန်းလေးက ဒေါက်တာတေဇာစန်း နေခဲ့တဲ့ တိုက်ခန်းကို စစ်ကောင်စီမှ ဝင်စီး